Imeyile ifile? Sukuyixela loo nto kuJenni noJanneane | Martech Zone
Imeyile ifile? Sukuyixelela loo nto kuJenni noJanneane
NgoLwesihlanu, Oktobha 29, 2010 NgoMgqibelo, Oktobha 29, 2011 Douglas Karr
Rhoqo emva kwexesha uye uve ukugquma ... i-imeyile ifile. Ngokwesiqhelo ziimbumbulu ezivela kubantu abangena mngeni kwibhokisi engenayo kwaye abaze benze imali ngokufanelekileyo kwimizamo yabo ye-imeyile. Imeyile ikude nokufa… kwaye ubungqina ngamashishini afana Indy Umbukeli.
Indy Umbukeli yinkampani esekwe kwi-imeyile kuphela. Baqeshe ababhali abanetalente ukuba babalise amabali e-niche malunga nokuqhubekayo e-Indianapolis. UJenni Edwards wayibona le mbono kwezinye iimarike kwaye, ekubeni yena wayengumntu othungelanayo omangalisayo, wazimanya noJanneane Blevins ukwenza esi siqalo siphumelele ngokumangalisayo. Ukusukela ngo-Epreli, babonile ukuba uluhlu lwabo babhalisileyo luphindwe kasixhenxe!
Kutshanje baphinde baphinde baphinda babuya ngegama, ngoncedo lwe Abahlobo bakaKristian Andersen (yenye yeenkampani ezinamava olona hlobo lubalaseleyo kwihlabathi… kunye nomqeshi kuJanneaneane). Incwadana yeendaba yayisele imnandi ngenxa yomxholo… kodwa ngoku uyilo lubambe umxholo:
Ithini inqaku lam? Akukho ndlela iphakathi yokuhambisa umyalezo onje nge-imeyile. Ikhethekile, yabucala, kwaye ikudidi. Ibhlog yindawo elungileyo, kodwa ukusasaza kuye wonke umntu kubeka umxholo ngendlela eyahlukileyo, kwaye ngekhe kugqitywe okanye kuphendulwe ngendlela efanayo. Ukuyila uphawu olufana nomxholo kwenza ukuba kube yeklasi ngakumbi… khangela le imeyile!
Sukubala isiCwangciso seNgcaciso
Okt 29, 2010 ngexesha 11:39 AM
Enkosi uDoug ngothando! Kanye njengenqaku- iwebhusayithi yethu ayibuyiswanga kwakhona ngophawu olutsha ngoku… kufanele ukuba ibe mfutshane kwaye ibonise ezinye iifoto ezintle ezivela kwiJoetografi efakwe kwi-KA + Uyilo-oluzukileyo!
Njengenqaku- sikwasungula iSibukeli sokuqalisa ukugubungela iindaba eziqala nge-Indy… iyakulunga ngokulinganayo!
Enkosi kwakhona-i-imeyile ayikabikho!